Misy fijery ho amin'ny famotsorana atsy ho atsy
Janoary 10, 2010 amin'ny tolotra 4 Comments
Version manaraka dia handeha manan-danja ny sasany dia ahitana fiovana eo amin'ny lafiny mpanjifa, indrindra isika no mifamadika ny asynchronous Loading ny soratra sy ny fitakiana Loading ny hafa soratra ampiasaina ao (toy ny jQuery UI, Google Zavatra API, Microsoft Zavatra API sy ny hafa).
Ny fiovana dia midika fa mavesatra be ny pejy haingana kokoa ary lasa nandray kokoa. Koa hangups izay ateraky ny miadana Loading ny antoko fahatelo soratra (toy ilay voalaza ao amin'ny io bibikely) ho intsony.
Fanafahana izany dia mety ahitana fanavaozam-baovao ihany koa ny jQuery 1.4 izay manana haingana be maotera, ary satria izany no planed ny fanafahana tamin'ny 14 Janoary, Manantena isika hanafaka amin'ny faha-15.
Amin'ny fiainana talohan'ny famoahana dia efa mihazakazaka amin'ny toerana ity, ka raha mahita olana amin'ny nadika pejy, azafady mampahafantatra antsika.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: jquery, hafainganam-pandeha enhancements